Dowladda New Zealand waxay ku dhawaaqday xirmo taageero warshadaha safarka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dowladda New Zealand waxay ku dhawaaqday xirmo taageero warshadaha safarka ah
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Investments • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
sawir robyn ah oo laga soo qaaday Expo 2020
Kooxda Shirkadaha Alaab-qeybiyeyaasha Socdaalka ee New Zealand ayaa sheegay in ballanqaadka dowladda ee $ 47m ee lagu taageerayo warshadaha safarka ay muhiim u tahay in laga caawiyo soo celinta lacagaha safarka ee dadka reer New Zealand ee safarkooda caalamiga ah loo joojiyay sababo la xiriira COVID-19, ayay tiri Guddoomiyaha Kooxda, Robyn Galloway .
Alaab-qeybiyeyaasha warshadaha safarka, oo sidoo kale loo yaqaan jumladleyda, waxay la shaqeeyaan tafaariiqleyda safarka iyo macaamiisha shaqsiyeed si ay u ballansadaan waayo-aragnimada safarka caalamiga ah sida dalxiisyada hagida, dalxiisyada, martigaliyaasha kooxaha yar yar, iyo ciidaha dalxiiska ee ka badan 150 dal. Shirkadaha badankood ee ka shaqeeya warshadaha waa SME oo leh shaqaale shaqaale dumar ah.
Dhibaatada COVID iyo xiritaanka xuduudaha waxay la macno tahay in wershaduhu ay ku shaqeynayeen bilaa dakhli muddo lix bilood ah illaa iyo hadda iyagoo ka shaqeynaya inay macaamiisha ka helaan lacagaha ay uga soo celiyaan shirkadaha ka shaqeeya dibedda.
"Taageerada Dowladda waxay muhiim u tahay ganacsatadeena inay sii wadaan inay ka shaqeeyaan sidii lacagta Kiwis loogu keeni lahaa guriga," ayay tiri Robyn Galloway.
“Waxaa lagu qiyaasaa in ku dhowaad $ 700m oo ah lacagta dadka reer New Zealand ay haatan kuxirantahay boosaskii safarada caalamiga. Ku soo celinta lacagtaan New Zealand waxay noqon doontaa kor u kac dhaqaale, maadaama markaa lagu isticmaali karo dhaqaalaha maxalliga ah. Tani waa shaqo cakiran oo ku tiirsan khibrada iyo xiriirka shirkadaheena socdaalka ay la leeyihiin la-hawlgalayaal badan oo caalami ah.
“Waxay ahayd inaan dhinno kharashaadka oo aan shaqaalaha ka dhigno kuwo aan culeys lahayn lixdii bilood ee la soo dhaafay si aan ugu sii jirno ganacsiga, shirkado badan oo safar ahna way dhibtoonayaan oo waxaa lagu qasbay inay hoos u dhigaan, taas oo kordhinaysa halista ah in lacagaha dadka safarka ah ee Kiwi ay ku xayiraan dibadda.
“Lafaha ayaan ka dhigeynaa xaqiiqda maalgashiga ay dowladdu bixinayso waa mid yar. Waxaan qireynaa inay jiraan wicitaano badan oo ku saabsan jeebka dadweynaha hadda, laakiin wanaagga lagu gaarey keenista lacagta dadka socotada ah ayaa caddeynaysa kaalmada dawladda. Markaan sidaas leenahay, aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqeynaa wasiir Faafoi iyo kooxdiisaba inay nala shaqeeyaan oo ay dhageystaan ​​tabashooyinka aan qabno iyo daaweynta aan soo bandhignay.
- Waxaan la soconaa in ay jiraan wax yar oo warshado New Zealand ah oo ay saameeyeen oo ay wiiqeen aafada ilaa heerka ay ahayd in dalxiisyada socdaalku ay ahaayeen. Waxaan sii wadnay inaan si adag oo aad u adag ugu shaqeyno macaamiisheenna inta lagu jiro cudurkan faafa oo aan fursad u helin in dhaqaale lagu soo celiyo.
“Taageerada dowlada waxay naga caawin doontaa inaan warshadeena ku ilaalino nolosha inta aan sii wadayno inaan ka shaqeyno keenista lacagaha Kiwis guriga, laakiin kuma filnaan doonto inaan sii wadno warshadeena mustaqbalka fog.
“Waa muhiim inaan ka helno taageeradan shirkadaha safarka sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan rajeyneynaa inaan kala shaqeyno Dowladda faahfaahinta fulinta ee siyaasaddan iyo taageerada kale ee xubnahayaga, ”ayay tiri Robyn Galloway